Zvigadzirwa mhando Vatengesi uye Fekitori - China Zvigadzirwa mhando Vagadziri
Yakamira isina waya Kuchaja Mira 10W - Yakanakisa Wireless Chaja Imire
Iyi 10W / 15w tambo yekuchaja isina waya kubva kuLANTAISI ine mukana wakanaka wekukubvumidza iwe kuti urambe uchishandisa foni yako sezvainochaja.
Hupamhi hwebhedha hwakagadziriswa, asi hwakazara zvakakwana kuti ugadzire chero smartphone. Izvo zvakare zvine pasi zvine musoro, zvichiita kuti zvive nyore sekuisa foni yako pasi yakatwasuka sezvo yakamira yakatwasuka.
Doko racho pacharo rakasimba kwazvo, nekuda kwetsoka ine rupo, asi chishandiso pachacho chisina kunyanya kukura. Iyo ine yakapusa asi inoshanda matte nhema mapurasitiki dhizaini.
Chichena chena LED inokuzivisa iwe kuti charger iri kushanda nemazvo, asi zvinofadza zvakavanzwa kunze kwenzira pazasi pechiteshi.
Certified yeApple uye Samsung Fast Charge, iyo Lantaisi charger inogona kunge iri pricier kupfuura vamwe, asi kutaura zvazviri kwete, uye iwe unogona kuve nechokwadi kuti ichaendesa akakwana ekumhanyisa kumhanya, uye hapana wired adapta mubhokisi.
Dual Fast Wireless Chaja - Yakanyanya Mazhinji-Midziyo Wireless Chaja
Kunyangwe uchikwanisa kubhadharisa maviri anoenderana neQi zvigadzirwa kamwechete, nekuda kwemashanu coils akasungirirwa mukati mukati, iyo LANTAISI charger haina kunyanyisa kukura kana kunetsa. Icho chigadzirwa chakatsetseka chine dema meshed kumusoro kwete kusiyana neicho chemutauri, asi chakanyanya kusviba - hachisi icho chakanyanya kukura kupfuura mazhinji emazuva ano mafoni. Chokwadi, neiyo imwe smartphone uye iwatch kumusoro hapana nzvimbo yakawanda yekutamba uchitenderedza nemaitiro avakagadzika, asi nefoni imwe chete ku ...
15W Pasina Chaja Pad
Mumakore mashoma apfuura, takaona mawachi achibhadharisa waya, mamwe kumashure kweserura foni yako, uye rutsigiro rwekuchaja isina waya mumatare ehedhifoni, futi. Kutengesa zvisina waya kazhinji kunononoka pane kubhadharisa wired - izvi hazvirevi Lantaisi isina waya charger uye yayo yepamusoro-inokurumidza Warp Charge 50 Wireless tekinoroji - asi zviri nyore kwazvo kungoisa mudziyo wako pasi padhiji yekuchaja uye usambopunzika netambo. Iyo Pad ine inokwanisa kubhadharisa nekukurumidza kumhanya ...
Mira Chimiro Chidimbu SW09
SW09 ndeye yakamira yakamira mhando isina waya inokurumidza charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha. Yakazara ABS yekuonekwa kwezvinhu, yakareruka uremu. Unogona kuchaja foni yakatwasuka kana yakatwasuka uye wotarisa mavhidhiyo panguva imwe chete, iri nyore kwazvo kushandiswa kwezuva nezuva. Yakasarudzika ergonomic dhizaini 70 angles, yakasununguka inoonekwa kona kana uchiishandisa kuona TV.
TS06 idesktop dhizaini isina waya yekuchaja, iyo ine mhete ye LED.
Inogona kubhadharisa nhare mbozha uye zvimwe zvigadzirwa zveQi zvinogoneswa. Nemidziyo yepende yerabha, inogona kupa yakasununguka uye yepamusoro-yekugunzva kubata manzwiro paunobata kana kuishandisa. Iine LED, pane nzira yeusiku kune vashandisi, kuitira kuti vashandisi vagone kuishandisa zviri nyore kunyangwe munzvimbo yakasviba isina mwenje. Iyi ndiyo yedu yakavanzika modhi modhi, hapana yakafanana chimiro pamusika.
Zvigadzirwa Ratidza. / Chitupa: QI chitupa, FCC, CE, ROHS chitupa Chipo bhokisi uremu: 136g Kubhadharisa Shanduko Yekuchinja: ≧ 76% Saizi yekatoni saizi: 400 * 315 * 260mm (108 pcs patoni) zvemukati: mudziyo, 1m yakareba Tpye-C tambo, isu ...
TS01 idesktop mhando isina waya charger iyo inoshandiswa kubhadharisa nharembozha uye mamwe maQi anogoneswa michina, iine 10W-15W Maximum kuburitsa. Paunenge uchida kuchaja foni yako, ingoiisa paTS01 uye kubhadharisa. Inogona kushandiswa kumba, hofisi kana dzimwe nzvimbo. Yakarongedzwa mucheka weganda pamusoro uye ABS goko, rakakura mwenje uye nyore kutakura, ita kuti hupenyu hwako huve nyore!
Mira Sinema Series Series SW08
SW08 ndeye yakamira yakamira mhando yemhando isina waya charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha. Inoenderana nemidziyo yese inogoneswa neQi, kubhadharisa foni yakatwasuka kana yakatwasuka. Yakasarudzika yakagadzirwa pamusoro peganda uye aluminium alloy kesi, yakaiswa patafura, plug mune tambo yemagetsi uye kuchaja foni nekukasira, imwe kumba, imwe kuhofisi.